Ciidanka Xoogga dalka oo degmadda Galdogob kasoo qabtay Nin Gaalkacyo ku dilay Qof Rayid ah. | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Ciidanka Xoogga dalka oo degmadda Galdogob kasoo qabtay Nin Gaalkacyo ku dilay...
Ciidanka Xoogga dalka oo degmadda Galdogob kasoo qabtay Nin Gaalkacyo ku dilay Qof Rayid ah.
Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan Ururka Guulwade oo dhowaan Taliyaha CXD uu ka aas-aasay Magaaladda Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug, ayaa maanta gacanta ku dhigay Gacan ku dhiigle Abshir Cabdulle C/raxmaan oo 12 February 2018 Gaalkacyo ku dilay Qof rayid ah oo lagu Magacaabi jiray Hanad Jaamac Faarax.
Ciidanka oo howlgal lagu baadi goobayo Abshir Cabdulle muddooyinkii u dambeeyey waday, ayaa gacan ku dhiiglahaan kasoo qabtay Degmadda Galdogob oo dhinaca galbeed ka xigta Magaalada Gaalkacyo, halkaasi oo in muddo ah uu ku dhuumanayey.
Taliyaha Ururka Guul wade Korneel Cabdi Xukun, ayaa Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee SONNA u xaqiijiyey qabashada gacan ku dhiigle Abshir Cabdulle, isaggoo xusay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo horkeeni doono Cadaaladda.
Previous articleTababar lagu baraneyey hanaanka sharci qorista iyo farsamooyin kale oo Muqdisho lagu soo gabogabeeyey (Sawirro).
Next articleWasaaradda Caafimaadka XFS oo gaadiidka gargaarka deg dega ah ku wareejisay qaar kamid ah Isbitaalada Muqdisho